Qaxootiga lagu jaajuuso dalkan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxootiga lagu jaajuuso dalkan
La daabacay måndag 28 maj 2012 kl 11.09
Kumanaan ajahanimiya oo ku nool dalkan Sweden ayaa la jaajuusa. Dadyoowgan la jaajuuso ayaa ah qaar degen dalkan Sweden kana soo baqoolay wadamadoodii magan galisna u degen dalkan Sweden.
Tobankii sanno ee u dambaysay ayaa waxa sirdoonkan dalkan Sweden ogaadeen in ay jiraan ilaa labaatan dawladood oo daba gal iyo jaajuusnimo ku haysa dadka qaxootiga magan galyada u jooga dalkan Sweden, sidaasi waxa sheegay sirdoonka dalkan Sweden, säkerhetspolisen.
Markay ogaadaan sirdoonku dadka jaajuusaya qaxootiga mucaaridka ku ah wadamadaas ay ka soo jeedaan ayaan waxba laga qaban in wadanka laga tarxiilo mooye, siday sheegeen sirdoonka dalkan Sweden.
- Dabagalka iyo basaasnimadu waxay ku dhex jiri kartaa sida wakaaladaha wararka, xafiisyada laga iibsado tikidhada diyaaradaha, sido kale waxay noqon karaan qaxooti been been isku soo dhiibay si ay dadka qaxootiga ah u basaasaan iyo ururada kalaba, sidaas waxa sheegay Wilhelm Unge oo ah madaxa qiyaasta basaasnimada ee sirdoonka dalkan Sweden svenska säkerhetspolisen.
Yasir Al-Sayed Issa waa wiil u dhashay dalka siiriya isla markaasna ka soo horjeeda dawlada dalkaasi, waxa ka mida shaqada u hayo in u dadka ku baahiyo waxyaabaha ka dhacaya siiriiya isago adeegsanaya sawiro, filimo lid ku ah dawlada Siiriiya.
Yasir Al-Sayed ayaa hanjabaad kala kulmay shaqadaas u hayo.
- Ta ugu weyn ee aan la kulmaa waa shakiga dadka igu ag xeeraan, maaliintii isku dariiq ma maro markaan u socdo shaqada iyo markaan imanayo gurigaba si aan u yareeyo khatarta aan la kulmi karo.
Wuxu kale oo uu sheegay in cayladiisa khatar ku jirto haddii uu sii wado halganka u ku jiro, taaso ahba wax u la kulmay oo dhacday,
- cayladayda degen dalka Siiriya waxay la kulmeen caga jugleyn iyo xabsi, rasaasayn, dareenka in wax aan anigu sameeyay loo ciqaabocayladayda waa mid foolxun, waana dareen culus.
Dadka qaar way iska sooceen bulshada inteeda kale si ay uga badbaadaan daba galka ay dawlaada dalkaasi ku hayso, cabsi la xidhiidha shaqada aan hayo darteed, ayuu sheegay Yasir Al-Sayed, balse kaligiis maaha ee waxa jira kumanaan kale oo dhibkaas kala kulmo dawladaha dalalka ay ka soo qaxeen, sida ay sirdoonka dalku sheegayaan.
- Qaar badan oo ka mid ahi waxay ku nool yiihiin cabsi, mana awoodaan in ay isticmaalaan xoriyadooda u gaarka ah in ay u codeeyaan xisbiga ay rabaan doorashooyinka dalkan Sweden ka dhaca, taaso ah in dimuquraadiyada Sweden aanay si wacan u shaqaynayn, sidaas waxa sheegay Wilhelm Unge oo ah madaxa qiyaasta basaasnimada ee sirdoonka dalkan Sweden svenska säkerhetspolisen.